Ukunyuka kwePoint Point Ukuchazwa Inkcazo kunye neNkqubo
Yiyiphi i-Potential Point Point Elevation and How It Works
Iqondo lokubilisa eliphakamileyo lenzeke xa iphuzu lokubilisa lesisombululo liba liphakamileyo kuneyona ndawo yokubilisa yoluhlu olusulungekileyo. Iqondo lokushisa apho amathumba okuxazululwa anyuzwa ngokungongeza nayiphi na into engeyiyo inzululwazi. Umzekelo oqhelekileyo wendawo yokubilisa ukuphakama ungabonwa ngokungeza ityuwa kumanzi . Ingongoma yokubilisa yamanzi yanda (nangona kwimeko apha, ayinakwanela ukuchaphazela izinga lokupheka lokutya).
Indawo yokubilisa yokuphakama , njengendiza yokuqhaqhazelisa iphoyinti , yipropati enobunzima bomcimbi . Oku kuthetha ukuba kuxhomekeke kwinani leengqungquthela ezikhoyo kwisisombululo kwaye kungekhona ngohlobo lweengqungquthela okanye ubunzima babo. Ngamanye amazwi, ukwandisa ukuxinwa kweengqungquthela kwandisa ubushushu apho isisombululo sesithumba.
Imisebenzi yokuLungiswa kwePoint Point
Ngokucacileyo, iphuzu lokubilisa liyanda ngenxa yokuba ininzi yeengqungquthela ezisezantsi zihlala kwisigaba samanzi kunokungena kwisigaba segesi. Ukuze utywala ubilise, uxinzelelo lwe-vapor kufuneka ludlule uxinzelelo olubi, olunzima ukufezekisa xa ungeze i-non-polluted component. Ukuba uthanda, unokucinga ngokufaka i-solute njenge- diluting i-solvent. Akunandaba nokuba i-solute i-electrolyte okanye ayikho. Ngokomzekelo, iphuzu lokubilisa ukuphakama kwamanzi kwenzeka nokuba uyongeza ityuwa (i-electrolyte) okanye ushukela (kungekhona i-electrolyte).
I-Point of Boiling Point Elevation Equation
Isixa sokubilisa sokuphakama kwesibhakabhaka singabalwa kusetyenziswa ukulingana kweClausius-Clapeyron kunye nomthetho kaRaoult. Isisombululo esilungileyo:
Isilinganiselwa sokubilisa se-Point = Ukubilisa i- solvent Point + ΔT b
apho ΔT b = i-molality * K b * i
kunye neB b = i-ebullioscopic rhoqo (0.52 ° C kg / i-mol amanzi) kwaye i = Van't Hoff
I-equation ibhalwe ngokuqhelekileyo ngokuthi:
Indawo yokubilisa yokuphakama kokuphakama ixhomekeke kwi-solvent. Ngokomzekelo, nasi imisonto yezinye izixazululo eziqhelekileyo:
solvent indawo ebilisayo yokubilisa, o C K b , o C m -1
amanzi 100.0 0.512
Indlela yokulungisa izixazululo eziqhelekileyo zeAidid Solutions
Kufuneka Ufunde Ukuba Uthanda 'uWalden'
Kutheni kungekho nto iphosakeleyo ngeSahlulo seNgcaciso
Ukubhukuda Vula Uguqula abaSwina
Izibambiso zesiTenzi zesiTaliyane: Usare
I-Sungir: Indawo yaseRussia ephezulu yePaleolithic
I-Biography yoMlobi kunye noMmeli uDave Eggers
I-Ontario iyavumelana ngokuThengiswa kwentlawulo (HST)
Ziziphi izibonakaliso ze-Zodiac Ziyabuthandana?